Sina Padlock, hidy varahina manahaka, hidy vy tsy misy fangarony, hidin-trano, hidin-trano fanoherana ny halatra, hidin-tenimiafina, hidin-tànan'ny rantsan-tànana ary ireo mpamokatra padlocks hafa | Boda
Fanasokajiana ny padlocks
Betsaka ny karazany sy ny famaritana ny padlocks. Amin'ny ankapobeny, ny haben'ny hidin-trano dia voafaritry ny sakan'ny vatan'ny hidin-trano, ny tanjon'ny hidin-trano dia voafaritra amin'ny haavon'ny lozam-baravarana, ary ny andiana lakile dia voafaritry ny fomba fanokafana ny padlock, toy ny mivantana fanokafana, fisokafana marindrano, fanokafana ambony ary fanokafana roa. Ny padlocks mahazatra antsika dia matetika misokatra sy misokatra marindrano.
Izany hoe, rehefa ampidirina ao anaty lozin'ny lakilen'ny hidy ny lakile dia azo sintomina miakatra tsy misy fihodinana ilay lakile, izay antsoina hoe "mamoha ambony". Ity karazana padlock ity dia mety indrindra amin'ny fitazonana zazakely na mitondra olona misokatra izay tsy mety mametraka lahatsoratra. Ilay antsoina hoe "double padlock" dia manondro ny hidin-trano izay tsy azo sokafana raha tsy mandeha ny lakilasy roa. Izy io dia manana fahombiazan'ny fiarovana matanjaka ary mety amin'ny fotoana ilana olona roa hitana ny hidin-trano ary misy olona roa hanokatra ny hidiny miaraka amin'izay, toy ny trano fanatobiana entana sy banky.
Ankoatry ny fanasokajiana ny padlocks araka ny fomba fanokafana (fanokafana mivantana, fisokafana mihombo, fanokafana ambony, fanokafana roa), azontsika atao ihany koa ny manasokajy azy ireo arakaraka ny firafitra anatiny misy ny padlocks. Ireto no karazana mahazatra: padlocks vita amin'ny marbra
Locklock key iray teny
Ity karazana hidin-trano ity dia mampiasa lohataona lava volo mba hametrahana sakana ao amin'ny varingarina hidin-trano, ka tsy afaka mihodina ny varingarina hidy ary mahatratra ny fiasan'ny fanidiana. Ny firafitry ny bala dia iray amin'ireo firafitry ny hidin-trano mahazatra. Ny vatan'ny hidin-karazan'akanjo iray dia mihantona amin'ny vy, izay manome ny olona fahatsapana ho matevina sy mafy orina. Antsoina hoe "hidin-drafitra arivo" izy io. Na izany aza, ny firafiny anatiny dia rafitra bilyard ihany koa, noho izany dia tafiditra ao amin'ny sokajy ny firafitry ny bala izy io. Ity karazana hidin-trano ity dia mampiasa vy metaly misy endrika samihafa hanakanana sy hanidiana azy. Ity karazana firafitra ity dia matetika ampiasaina amin'ny firaka zinc na eo am-baravarankely.
Magnetic firafitra padlock:
Araka ny fitsipiky ny fandroahana andriamby dia misy rafitra varingarina manidy hidy. Ny tabilao fizara vy tsy miova miaraka amin'ny takelaka andriamby mitovy amin'ny fanalahidy dia napetraka eo anelanelan'ny lalan-drindrina sy ny tsimatra azo antoka. Ny lakilasy dia tsy mifandray mivantana amin'ny tsimatra fiarovana. Rehefa ampidirina am-pilaminana ao anaty lozin'ny varingarina ny tsindry magnetika tsy slot, dia manohina ny takelaka fisarahana vy ny lakilasy ary miteraka hery fanoherana mahery vaika, izay mamoha mora foana ny hidiny. Ho fanampin'izany, ny fitsipiky ny fisintomana andriamby dia ampiasaina hanoratanao tsara ny lovia vy sy hanokafana ny hidiny amin'ny lohataona.
Padlocks dia: fantsom-by vy, varahina varahina, firaketana vy nopetahany takela-by, fehim-by vy, fividianana varahina manahaka, fehiloha firaka zinc, hidy fork, hidin-trano
1. Padlock vy tsy misy fangarony: ity karazana padlock ity dia miavaka amin'ny fanoherana oksidasiana matanjaka ary mety amin'ny fampiasana ivelany. Na izany aza, noho ny fahasarotan'ny fikirakirana sy ny vidiny lafo dia zara raha ampiasaina any Shina izy io.
2. Varahina varahina: ny varahina lehibe indrindra no hidin-trano, ary ny mahazatra ampiasaina dia fanidiana varahina kely, izay latsaky ny 40mm ny habeny, indrindra satria somary avo ny vidin'ny varahina.
3. Vato vy: mahazatra be.
B. Fandoko vy volondavenona: ny lokony dia voatsabo miaraka amin'ny loko volondavenona, ary avy eo dia misy padlock miloko maro, izay ao anatin'io sokajy io avokoa.
C. Padlock varahina alaina: an'ny hidy vy misy herinaratra io, izay manondro ny fametahana varahina eo amboniny
4. Padlock zinc: ity karazana padlock ity dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny milina fanariana maty izay avo lenta.
3 、 Amin'ny endriny
2. hidy rojo
3. hidin-karazany U
BOSENDA dia mamatsy isan-karazany padlocks, ny padlocks antsika dia nalefa tany amin'ny firenena Azia Atsinanana atsimo, nankany Amerika atsimo, Eropa, firenena EU Atsinanana ary Moyen Orient. Raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mifandray aminay.
Previous: PVC lamba Prrof orana, lamba porofon'ny orana PE, fonony kamio
Manaraka: Rojo, rojo manandratra, rojo vy, vy rojo vy, famaritana isan-karazany
Kitendry kaody amin'ny rantsantanana